4shokelay: March 2010
Posted by 4shokelay at 10:53 PM No comments:
ညီနောင်တို့၊ နှမတို့... စစ်ရွေးကောက်ပွဲ ၊ ၀င်ကြမယ်.....တဲ့။ ဖြစ်ဖြစ်......၊
အန်တီစု ကိုယ်တိုင် ဘဲဖြစ်ဖြစ် .....။
သူတို့ကိုယ်စီမှာကိုယ်ပိုင် အခွင့်အရေးရှိကြတယ်။ လူတစ်ဦးချင်း
ပါတီတစ်ပါတီ ချင်း သူတို့အခွင့်အရေး နဲ့ သူတို့ ... လွှတ်တော်
ရောက်ရောက်××× ပဲခူး ရောက်ရောက် ×××စစ်ကိုင်းရောက်ရောက်
×××နှင်လိုရာခရီး ခိုင်းခွင့်ရှိတာပဲ ×××။
တစ်ခုတော့ ပြောစရာရှိမယ် ×××××
ဖိုးပါချင်တို့ မယ်ပါချင်တို့ ကိုယ့်တန်ဖိုးနဲ့ ကိုယ်။
ကိုယ့်တန်ဖိုးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ် ဒို့ပြည်သူတွေတင်တဲ့ နိုင်ငံရေးစင်မြင့် ထက်
စစ်လွှတ်တော် စင်မြင့် ကိုပို မက်ပြီးရွှေးကောက် ပွဲ ၀င်မယ့် ဟာကို
ဘဲ။င ဒို့ လူထုပေးတဲ့ '' ပြည်သူ့ သူရဲ ကောင်း ဘွဲ့ ထက် စစ်အာဏာရှင်မျက်နှာ
သာပေးမှုကို ပို မတ်မောပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ့် ဟာကို ဘဲ×××××
ငါတို့×××××ပြည်သူအကျိုးကိုဆောင် ဖို့ ဒို့ ပြည်သူတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်ဖို့
စစ်ရွေးကောက်ပွဲ ကြီး ၀င်ရသလော၊×××××စစ်လွှတ်တော်ကြီး
တက်ရပါသလော×××××လို့××××× မုန်လာဥ လုပ်ကြွေးကြော်နေ တာတော့ဖြင့်
မနိပ်ပါဘူး။ သူတို့ အဆို ရဲ့ အလိုက စစ်အစိုးရဘဲ ငါ့ ဒို့ ပြည်သူ
အကျိုးကို ဆောင်နေတာ လိုလို စစ်အာဏာရှင်နဲ့ငါ့ ဒို့
ပြည်သူတွေကဘဲနိုင်ငံရေး ရပ်တည်မှု မှာတစ်ဂိုဏ်းတည်းဖြစ်နေသလိုလို"×××××။
ဒါကတော့င ဒို့ အစော်ကားခံ ရတာဘဲ။င ဒို့ ပြည်သူ အကျိုးစီးပွားတွေကို
စစ်အစိုးရက ရစရာမရှိအောင် ခြေမှုန်းပစ်ခဲ့ တာ ဒီအနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် အတွင်း
လျှပ်စစ်မီးတောင်မှ အခုဆို၊ ရက်သတ္တပတ် လုံး နေလို့ မှ(၂၄)
နာရီကြာအောင်မလင်းတော့ ပါဘူး။ ကွင်းထဲက လယ် တဲ လေးတွေကြည့်။ ဆင်ခြေဖုံးဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ကြည့်။မီးဆင်မထားဘူး။
ဆင်တော့ မလွှဲသာအရေးပါတဲ့ တစ်ပွင့်တစ်လေ၊ တစ်နေရာလောက် မှိန်ပြပြဘဲ။
ဘာကိုပြလဲ။ မီးသုံးဖို့ မတတ်နိုင်တာ။ လျှပ်စစ်မီး အစားတစ်ခြားဦး စားပေး
သုံး စရာတွေအကုန်ကျခံနေရတာ။ တိုင်းပြည်နဲ့ ကြည့် တော့ လည်း မီး မပေးနိုင်
" မွဲပြီ " လို့ ဖော်ပြနေတာပဲ။ င ဒို့တိုင်းပြည်က ရှိသမျှ ၊ ငဒို့ပြည်သူ
" အမျိုးသားပြန်လည် သင့် မြတ် / ရင်ကြားစေ့ရေးပါ××××× တဲ့ "
င ဒို့ နားမ ဆန့် အောင် ကြားတယ်××××× ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်လူ
သင့်မြတ်ရေးတဲ့ လဲ ဟေ့×××× ကဲ----" ငဒို့ ဘယ်သူနဲ့
နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ပြည်သူတွေ နဲ့၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အချင်းချင်း၊
ဘယ်လိုတိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာ ရှိလို့လဲ ၊ဗမာကလည်း ရှမ်းကို
ဘယ်နှယ့်မှမလုပ၊် ရှမ်းကလည်း ကရင်ကို ၊ကရင်ကလည်းမွန်ကို၊ မွန်ကလည်း
ကချင်ကို ၊ကချင်က ရခိုင်ကို ၊ရခိုင်ကဗမာ ကို ၊ဘယ်လူ့
ဘယ်သူကမှစစ်ခင်းသတ်ဖြတ်နေတာ မရှိဘူး။ ကုလားတွေ....တရုပ်တွေ ၊ဧည့်သည်တွေ
ပါမကျန် အတူတကွ သင့်မြတ်နေကြတာပဲ။ ဘယ်အမျိုးပြုတ်အောင် ဘယ်သူ
တိုက်ခိုက်နေ တာရှိလဲ ။
[စစ်အစိုးရ၀င်မွှေရင်တော့ သွေးကွဲ ကြတာ ရှိ တယ်။(ဥပမာ-ဒီကေဘီအေ ကိစ္စ။) ]
" စစ်အစိုးရ ကတော့ တစ်မျိုးသားလုံး မျိုးပြုတ်အောင် သတ်နေတယ်" ×××××
" ရန်ကုန်မှာ ၊မန္တလေး မှာ၊ တခြားမြို့ ကြီး
တွေမှာ(ဗမာအများစုပါတဲ့)လူတွေကို အစုလိုက် အပြုံ
ရှမ်းပြည်မှာဟိုတစ်လောက ကိုးကန့်တွေကို သတ်တယ်။နှစ်ခြမ်းကွဲဖို့ သပ်လျှို
တယ်။ တောကြို့ အုံကြား တောင်တန်းသား မြေပြန့်သား ပြည်မ နေသော သူများ
အဖြူအမည်းမရွေး လူဘဲ သံဃာ ဘဲ မရွေး၊ သူတို့ စိတ်ရူးထ မှော်ဝင်တဲ့
အခါတိုင်း တွေ့ ရာသင်္ချိုင်း မှာတွေးတော အဆုတ် အဆိုင်း မရှိဘဲ သတ်နေတာ
ငဒို့ မျက်မြင်ဘဲ။ တစ်မျိုးသားလုံးပြည်သူတွေနဲ့ မသင့် မမြတ်၊
စစ်ခင်းသတ်ဖြတ်နေတာ စစ်အာဏာရူးတွေ ဘဲ××××(ဟိုတစ်လောတုန်း က အမျိုးသ္မီး
အခွင့် အရေး ပြောသွားတဲ့ ရှမ်းမလေးရဲ့ အဖေကို န.အ.ဖ တွေသတ်ပစ်တယ်တဲ့ "
ဗမာစစ်သား"လို့ မပြော ပါဘူး)××××× "ဘယ်သူတွေဘယ်သူနဲ့
သင့်မြတ်ချင်နေတာလဲ"××××× ရှင်းပါတယ်×××××ငါတို့ အားလုံး အချင်းချင်း၊
ဘာမှမဖြစ်ကြတာ၊ သူတို့ သင့်မြတ်ချင်နေကျတဲ့ သူဟာ ငါဒို့ကိုသတ်ဖြတ်နေ တဲ့
စစ်အုပ်စုနဲ့ သင့်မြတ်ချင်တာပဲ ပေါ့၊ သူတို့ ချင်း သင့်မြတ်တယ်ဆို
လည်းသင့်မြတ်ကြပါ။ သူတို့ ကိစ္စ၊ ငါတို့ ကို သင့် မြတ်ပါလို့ ဆိုရင် တော့
ငါတို့ မှာလည်း ဘယ် စစ်ဗိုလ်ချုပ်၊ ဘယ်စစ်တပ်၊ ဘယ်စစ်သားကို မှ
တိုက်ခိုက် သတ်ဖြတ်နေ တယ်လို့ လည်း မရှိ၊ သူတို့ ကို
သတ်ဖြတ်နိုင်လောက်တဲ့ ဘာအခြေခံမှလည်းင ဒို့ မှာ မရှိ ၊ငဒို့ ကို
မသတ်ဖြတ်ရင်၊ မဖိနှိပ်ရင် ၊အနိုင်မကျင့် ရင် ငဒို့ ဘယ်သူကို မဆို သင့်
မြတ်မှာပဲ။င ဒို့ ကို မသတ်ဖြတ်မဖိနှိပ်အနိုင် မကျင့် ဖို့ ဘာအာမခံ ချက်
ရှိလဲ။င ဒို့ ကြားက ပြသနာက အယူအဆမတူ တာ မဟုတ်ဘူး။ သတ်ဖြတ်ခံနေရတာ၊
ဖိစီးနှိပ်စက်နေတာ၊ အနိုင်ကျင့် ခံနေရ တာ၊ အခုကတော
" င ဒို့ ပေါ်သတ်လိုက သတ်စေ၊ သူတို့ ချင်းသင့် မြတ်ဖို့၊သူတို့
ပေါ်မငြိုငြင် ဖို့ အတွက် စစ်ရွေးကောက် ပွဲကြီးထဲ ၀င် ကြမယ်တဲ"့
င ဒို့ ပေါ်နိုင်တိုင်းကျင့် ခွင့် တရားဝင် အတည်ပြုတဲ့ အခြေခံ
ဥပဒေကိုလည်းသူတို့ သြဘာပေး အုံး မ တဲ့ ဒါကိုဘဲ ဒို့ အကျိုးလို့ စော်ကား
စကားဆိုသေး၊၊ ဟုတ်လိုက်လေ××× "မျိုးပြုတ်ကုန်မယ့် အကျိုး တွေ×××××။"
နောက်ထပ်တစ်ခု ပြောစရာရှိအုံးမယ် လွန်ခဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်လုံး မဟုတ်မဟတ်
ပြောချင်တိုင်း ပြော ၊လိမ်ချင်တိုင်းလိမ် ၊တိုက်ချင်တိုင်းတိုက်၊
ကိုယ့်အကျိုး ရှာချင်တိုင်း ရှာ တစ်တိုင်း ပြည်လုံး အသက်တွေ
၊အိုးအိမ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊ သစ်တောနဲ့ သယံဇတတွေ၊ မိမွေဖမွေ ရထားသလို
ပြုချင်တိုင် ပြုကျင့် ခဲ့တဲ့ ၊စစ်အုပ်စု ။အဲ့ ဒီစစ်အုပ်စုနန်းသိမ်း
ပလ္လင်မှာ ထီးဖြူဆောင်း ပိသိတ် တင်မယ့် စစ်ရွေးကောက်ပွဲကို အကဲ ခတ်ရအောင်
၁၉၈၈ ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံနဲ့
(၂)နှစ်အကွာတစ်ပြည်လုံးအရေးတော်ပုံ အင်အားစုတွေ အရံသင့်" ဒုနဲ့ ဒေး"။
လူထု ကလည်း နိုင်ငံရေး အသိနဲ့ သတိတွေ ထက်သန်၊ NLD ဆိုတာလည်း လူထု ရွေးမှာ
အစွာဆုံး အထက်ဆုံးရပ်နေချိန်။×××××န.၀.တ ဆိုတာ ဘာမှအသင့်မဖြစ်
(နဝေတိန်တောင်) မ.ဆ.လဟောင်းတွေ လူထုထဲ ခေါင်းမဖော်ရဲ ချိန် စစ်အာဏာကို
အာမခံတဲ့ ဘာဥပဒေမှမရှိသေး၊ အဲ့ ဒီ့ အခြေအနေ မှာ ဒို့ မဲပေးကြတဲ့ 
ရွေးကောက်ပွဲ (၁၉၉၀) မဲပေးကြတယ်င ဒို့ ရဲ့ NLD နိုင်တယ် ပြီးတော့ အခုနှစ်
နှစ်ဆယ်မှာ ဘာရလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်ပေါ် တိုးတတ် ခဲ့ လဲ၊ အလောင်းတွေ၊ အမွဲတွေ၊
မုဆိုးမတွေ၊ သူတောင်းစားတွေ၊ လူနာတွေ၊ ထောင်ထွက်တွေ၊
စီးပွားပျက်တွေ၊အလိမ်အညာတွေ၊ ခြစားတွေ ဗိုလ်ကျတွေငဒို့ မှာ" မျောက်လောင်း
က မတတ်ဘဲ "××××× အခုလေးတင်ဘဲ စာကြောင်း(၂)ကြောင်းလောက်နဲ့ (၁၉၉၀)
ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကြီးကို ရယ်စရာ ဗလောင်းဗလဲ လုပ်ခံကြရပြီ×××××" အခု ဒို့
မဲ ပေးကြည့် မလား"××××× အရင် နှစ်နှစ်ဆယ် ကျော် စစ်အုပ်စု အဘက်ဘက်
အကြပ်ရိုက် ချိန် င ဒို့ အစုအဝေး နဲ့ ထုထည်နဲ့ အရှိန်အဟုန်ကောင်းနဲ့
ရွေးကောက်ပွဲကို တိုက်ပွဲလို့ ဖြတ်မဲပေးခဲ့ ကြတုန်းကတောင် စစ်အာဏာရှင်
လုပ်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာ ပြတ်ကယ်×××ပြတ်ကယ်၊ တကယ် တန်းဘာမှမဟုတ်
(၂၀)လုံးလုံး ငါတို့ အရေစုပ် ခံ ခဲ့ ကြရတာပဲ။ စစ်နန်းမတော်ကြီး ထဲ အလည်
တစ်ခေါက် ရောက် ဖူးချင်သူတွေ ဟန်ရေးတပြင်ပြင် သံသေးသံ ကြောင်
ဟစ်နေကြပေမယ့်" ဒို့ ပြည်သူ့ အဖို့ ကျောရေစုပ် ခံထိထားတော့ ရွေးကောက်
ပွဲဆို စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ကမန်းပဲ"××××× စစ်အုပ်စုက အာဏာသက်ရှည် အသားကျ
အပါးဝနေပြီ ၊တစ်ပြည်လုံး အုပ်စီးမှု ယန္တရားအမြစ်ခြေခိုင်ခိုင် ထိပြီ NLD
ခြေကုန်နေပြီသွေးရူးသွေးတန်း အသံထွက်နေပြီ စစ်ပုလ္လင်ကို အထွဋ်တင်ဖို့
အခြေခံ ဥပဒေ ရှိပြီ ကြံ ဖွံ့ ရှိပြီ
များအသင်းတွေရှိနေပြီ နာယကကြီး များအဖွဲ့ တ.ဆ.ည။ ဒီကေဘီအေ၊
အရေးတော်ပုံအေးလွင်....ဒလန်တွေ အလံရှူးတွေ အင်နဲ့ အားနဲ့။င ဒို့
ဒါကြီးကို မဲသွားထည့်တော့ ဘာအဓိပ္ပါယ် ရှိလဲ အစော လေးက ဆန္ဒခံယူ ပွဲကြီး လဲ
ငဒို့ ဘယ်နှယောက်မဲသွားပေးလဲ ပေးခဲ့ တဲ့ မဲမှာလည်း ဘာတွေကို
ပေးခဲ့လည်းဆိုတာကိုင ဒို့တင် မကဘူး အားလုံးက အသိပါပဲ×××××
ဒါနဲ့တင် ပဲ ဖြူလားမဲလားမသိတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ရေးဆွဲတဲ့
အခြေခံဥပဒေကို ထောက်ခံ တာက ၉၀%ကျော်တောင်ထောက်ခံတယ်တဲ့ " ဖွီ "ရှက်မရှိကြတာ×××××။
အဲ့ဒါများ ငဒို့ ဘာမဲကို သယ့်သူကို သွားပေးရဦမလဲ။
" ဦးဓားပြတို့ ၊ဒေါ်လူသတ်သမား တို့ ကျနော်မျိုး၊ ကျမမျိုး တို့ကို
အဆုံးစီရင် ဖို့သန်လျက်တော် အပ်ပါတယ်×× လို့
သူတို့ ပါးစပ်က ပြည်သူပြည်သား×××××လို့
သံကုန်သံပြာဟစ်လို့စစ်ရွေးကောက်ပွဲထဲ လက်ကားယားခြေကားယား ၀င်ကြပြီ
×××ဆိုပါတော့။ ငဒို့ လမ်းထွက်သပိတ် မမှောက်နိုင်ဘူး။ ထိပ်တိုက် ဆန္ဒ
မပြနိုင်ဘူး။ ပိုစတာကပ်ထိပ်တိုက် တိုး မလုပ်နိုင်ဘူး။ တည့်တည့်ပြောရင်
စစ်အစိုးရကိုဖြုတ်မချနိုင် ဘူး။ ကိုယ်လုပ်ချင် တဲ့ ဒီမိုကရေစီ
တိုင်းပြည်မထူထောင်နိုင်ဘူး၊ လက်ရှိ ကအဲ့ဒီ အတိုင်းဘဲ(
ဒီနေရာ××ဘာ××ခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီ ရနိုင် ငဒို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုင
ဒို့မတတ်နိုင် မလုပ်နိုင်ကြသေး တာ)×××ဒါပေမယ့်င ဒို့ တစ်ဦးချင်းမဲ
သွားမပေး ရင် ရတယ။် သူတို့ဥပဒေကဖြစ်ဖြစ်၊ဘယ်သူ့ ဥပဒေ ကဖြစ်ဖြစ်၊
ဘယ်တိုင်းပြည် ဖြစ်ဖြစ် ၊ဘယ်ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ဖြစ၊်
" မဲမပေး တဲ့ သူ ဘာလုပ်ပစ်မယ် "×××××ဆိုတာ လို့ ပြဌာန်း
တာမရှိပါဘူးမဲ ပေးခွင့် ရှိတဲ့ နိုင်ငံသားစုစုပေါင်း ရဲ့ ၅၁%
ကျော်အောင်မဲ မပေးရင်ပြက်ကယ်×××ပက်ကယ် ရွေးကောက်ပွဲ အတုကြီး
၁။ စစ်အုပ်စု ကသူတို့ လူသူတို့ (စစ်သားဝန်ထမ်း တွေကို)ရေတွက်ပြီး
ရွေးကောက်ပွဲကြီးအထမြောက်တယ် လို့ လုပ်လို့ ရတယ်။
၂။ ရွေးကောက်ပွဲ နည်းနဲ့ အဖြေမထွက်လို့ ပါဆိုပြီး ..ငါ့ရယ်။ ငါ့သမက်ရယ်၊
ငါ့တပည့်ရယ်၊ ငါ့အောက်ဆွဲရယ်၊ ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ ပြီး ယာယီ အုပ်ချုပ်တယ်
×××ဆိုပြီး လုပ်လာနိုင်သေးတယ် ×××။
၃။ အာကာနဲ့ လက်နက် လက်ရှိ ရှိနေတော့ တခြား နည်းလမ်း များစွာ ကလိမ်ကကျစ်
""ငဒို့ လွတ်မြောက်ချင်ကြတယ်မဟုတ်လား နောက်ထပ်တစ်ဆင့် ပေါ့ ဆက် ဆွေးနွေး
( B . J )
Posted by 4shokelay at 8:27 AM No comments:
Labels: ဆောင်းပါး, ပေးပိုစာ
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ ၀န်းကျင်တွင် နေပြည်တော်မြို့တော်သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည့် စာနယ်ဇင်းသမားတို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည့် ဓာတ်ပုံများ ဖြစ်သည်။
သနပ်ခါးအဖွေးသားနှင့် တွေ့ရသည့် အလုပ်သမားတဦး
ပျဉ်းမနားဒေသတွင် တွေ့ရသော သံဃာတချို့၊ ထီးတလက်နှင့် သီလရှင် ၃ ပါး
တည်ဆောက်ဆဲ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ
ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားတချို့၊ ကလေးတချို့
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ နှင့် ထိပ်တန်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ
နွေနေပူဒဏ်ကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် အလုပ်သမားတဦး
Posted by 4shokelay at 2:08 PM No comments:
Posted by HRmyanmar at 10:18 AM No comments:
ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံက အဆုံးအဖြတ်အခါသမယ
မြန်မာပြည်ကစစ်အစိုးရဟာ ကျနော်တို့ပါတီဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို တရားဝင်ဆက်လက်ရပ်တည်လှုပ်ရှား မယ် မလှုပ်ရှားဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တရပ် ချဖို့အခြေ ဆိုက်စေခဲ့ပါတယ်။
Posted by 4shokelay at 7:38 AM No comments:
FDB Stm on NLD Decision
Joint Statement No-5-2010 of ABMA+88+ABFSU
“ဒီချုပ်ဆုံးဖြတ် ဒို့ဆုံးဖြတ် ဒီချုပ်အရေး ဒို့အရေး”
Posted by 4shokelay at 7:01 AM No comments:
Labels: ပေးပိုစာ, ကြေငြာချက်
လူ့ဘောင်သစ်က NLD ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လေးလေးနက်နက် ဂုဏ်ပြုကြိုဆို
Posted by 4shokelay at 10:16 PM No comments:
Labels: သတင်း, ပေးပိုစာ, ကြေငြာချက်
၂၉/ မတ် ၂၀၁၀
နအဖရဲ့ နောက်ဆုံးခြေလှမ်းဟာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်
စမ်းသပ်လိုက်တာပဲလို့ အလွယ်တကူပြောရင် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နအဖရဲ့ဒီထိုးစစ်ဟာ
မမျှော်လင့်ဘဲပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒင်းတို့တတွေ ဒီအတွက် ကြိတ်ကြံနေတယ်။
တချိန်ကျရင်၊ အထူးသဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကာလတ၀ိုက်မှာ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို “ကိုင်” တော့မယ်ဆိုတာ
အစောကြီးကတည်းက အများက တွက်ထားကြတာပါ။ ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဆိုတာကိုသာ
အခုတော့ အဖြေက ထွက်လာပါပြီ။ တွက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ကောင်းဘွိုင်ကားထဲက လူဆိုးလို သေနတ်တ၀င့်ဝင့်နဲ့
အဲဒီသေနတ်ကိုင်လူဆိုးက အခု အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို အဖြိုခွဲခံမလား၊ သူတို့ခွင့်ပြုတဲ့ ဥပဒေဘောင်
ထဲကနေ အပြင်ကိုထွက်သွားမလား၊ သူတို့ဖွင့်ပေးထားတဲ့ ပုံစံတံခါးပေါက်ကနေ ခေါင်းငုံ့ဝင်မလားလို့ ရွေးစရာတွေ
ပေးနေပါတယ်။ ဒါဟာ နအဖဘက်က သွေးတိုးစမ်းတာ မကတော့ပါဘူး။ စိန်ခေါ်တာ၊ စစ်ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီချုပ်အနေနဲ့ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရပါတော့မယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် (၂၀) တုန်းက
ကြံ့ခိုင်မှုမျိုး ရှိသေးသလားဆိုတာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က သက်သေပြရပါတော့မယ်။
သဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို နအဖက
အခုလို တမင်အညွန့်ချိုးဖို့ လုပ်တာဟာ ဒီနေ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ လှုပ်ရှားမှုနဲ့ စိတ်ဓာတ်အရှိန်ကို ချိုးနှိမ်ဖို့လုပ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ဦးတည်တယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ဦးတည်ထားတာ
ဒီတပွဲမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဦးကျိုးသွားရင် ပြည်သူလူထုရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးကိုလည်း
အများကြီးထိခိုက်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒါကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဦးတည်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာလို့
အသာလက်ပိုက်ကြည့်နေရင် ဒီတကွေ့ရဲ့ အချောင်သမားဖြစ်သွားပါမယ်။
ဖိနှိပ်တဲ့ အုပ်စိုးသူတွေနဲ့ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတို့အကြားက ပဋိပက္ခမှာ အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူတို့ဘက်က တိုက်ပွဲကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်
ပြင်ဆင်ပြီး ဆင်နွှဲနိုင်တာ အင်မတန်မှ နည်းပါတယ်။ တိုက်ပွဲအချိန်၊ တိုက်ပွဲနေရာဌာန၊ တိုက်ပွဲသဏ္ဌာန် စတာတွေကိုလည်း
ကိုယ်သဘောကျတာ ရွေးချယ်ခွင့် မရတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ပြည်သူလူထုဘက်က ခုခံစစ်ဆင်နွှဲရတာဖြစ်တယ်လို့
ပြောလေ့ရှိကြတာပါ။ အခုလည်းပဲ နအဖရွေးချယ်တဲ့အချိန်၊ နအဖရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ သူတွန်းပို့လာတဲ့နည်းနာနဲ့
ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အလှည့်မို့ နွဲ့လို့မရတော့ပါဘူး။ မြင့်တဲ့အပင်ဟာ လေတိုက်တဲ့ဒဏ်ကို
ဒီနေ့အတိုက်အခံအင်အားစုတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကရောက်နေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ဟာ နအဖရဲ့အပြင်းထန်ဆုံး
တိုက်ခိုက်တာကို ခံရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တပါတည်းမှာ ထောက်ပြဖို့လိုတာက ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဗိုလ်နေ၀င်း အာဏာသိမ်းတာဟာ ၁၉၅၈-၆၀ အတွင်း (၂) နှစ်လောက်
နန်းထိုင်လိုက်ရလို့ အာဏာရဲ့အရသာကို မောင်ကျန်တတို့ဖြစ်သွားပြီး တသက်လုံး နန်းစံဖို့ ကြိုးပမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်
အုပ်စုတွေဆိုတာ အဲဒီလိုအာဏာကလေး (၂) နှစ်လောက် ရလိုက်တာနဲ့ပဲ သံသရာဆုံးတိုင် အာဏာကိုင်ထားဖို့ စိတ်ကူးကြ
တယ်ဆိုရင် အနှစ် (၂၀) ကျော် အာဏာအရသာကို မြိန်မြိန်ကြီးစားသုံးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေတို့တတွေ ဘယ်လိုစိတ်ကူး
ကြမယ်ဆိုတာ အလွယ်နဲ့မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ လာမယ့် သူတို့ရဲ့လွှတ်တော်ထမှဲာ သူတို့က ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ
ဥပဒေဆိုတာနဲ့ လုယူထားတဲ့ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းသော ကိုယ်စားလှယ်အရေအတွက်လောက်နဲ့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲမယ်လို့ထင်ရင်
ညံ့လွန်းရာကျပါလိမ့်မယ်။ ဆန္ဒခံယူပွဲတုန်းက (၉၂.၂) ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်း ရအောင်ယူမယ်ဆိုတာကို မယုံမရှိပါနဲ့။ အဲဒီလို
လွှတ်တော်မျိုးထဲကနေ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ (၇၅) ရာခိုင်နှုန်းအထက် ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေရအောင်
စည်းရုံးမယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ စောင့်သာကြည့်ချင်ပါသေးတော့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
နအဖရဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဗြုန်းစားပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လမ်းပြမြေပုံ (၇) ချက်ဆွဲကတည်းက ပေါ်လာတာ
ဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းပြမြေပုံ (၇) ချက်အရဆိုရင် ဒါဟာနောက်ဆုံးအဆင့်၊ ဒါကိုဖြတ်သန်းပြီးရင် ဗိုလ်ချုပ်တွေ ရေသင်ဖြူးမှာ
လှေယာဉ်နြဲ့မူးဖို့သာ ရှိတော့တယ်လို့ တွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲမှာ ဒါဆိုရင် မြန်မာပြည်ကြီးကို စစ်အုပ်စု
အဆက်ဆက် ရာစုနှစ်နဲ့ချီပြီး အုပ်စိုးလို့ရသွားပြီလို့ စိတ်ချရတော့မှာပါ။ အနှစ် (၂၀) နီးပါး ပြင်ဆင်လာပြီးနောက်
အခုအခါမှာ ပိုင်ပြီထင်လို့ ဖော်ထုတ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှယ်နှယ့်အကြံအစည်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သဘောဝကျစွာပဲ တိုက်ပွဲဟာ
အခက်အခဲတွေ ရှိမှာပါ။ ကတုတ်ကျင်းတွေ စနစ်တကျ တူးပြီးသားအသင့်ဖြစ်နေတဲ့
ရန်သူနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ချီတက်နေတဲ့လူတို့ တိုက်ရတယ်ဆိုရင် ကတုတ်ကျင်းထဲကလူက
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ ဒီကာလပိုင်းဟာ နအဖအနေနဲ့ ရေနှောက်ငါးဖမ်းသလို
အတိုက်အခံတွေကို ဆန်ခါတင် စစ်နေတယ်လို့ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
သူတို့ရဲ့ပေါ်ပေါက်လာမယ့် စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီကာလကြီးမှာ ဘယ်သူတွေကို ဘယ်လိုနှိပ်ထားရမယ်ဆိုတာ ဒီတချီမှာ
တပါတည်း စာရင်းပြုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဘက်ကနေ ဘီလူးစည်း လူ့စည်းခွေဲ နတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက် နအဖစစ်အစိုးရကို ပိုတွက်ဖို့မလိုပါဘူး။ သူတို့တတွေ အာဏာရလေလေ၊ ဥစ္စာဓနတွေ တိုးပွားလေလေ
သူတို့ချင်းပြဿနာတွေ ပိုတက်လေလေ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါတရားပါ။ အရင်ကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ နောင်လည်း
ဒီလိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ တဖက်မှာလည်း ဒီလိုဆိုတဲ့အတွက် ဒင်းတို့တတွေ သူတို့ချင်းချကုန်ပြီး အလိုလိုပျက်စီးသွားမယ်လို့
မမျှော်လင့်သင့်ပါဘူး။ ကိုယ်က (ပြည်သူလူထုက) တွန်းမချရင် ပြိုမကျပါဘူး။
အဲဒီအတွက် အင်အားစုစည်းပါ။ ကျစ်လစ်အောင်၊ ကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်ပါ။ နည်းနာရှာပါ။ ကိုယ့်ဘက်မှာ ပြည်သူလူထု
ရှိနေရင် မရှိရာကနေ ရှိလာ၊ အားနည်းရာကနေ အားကြီးလာရမှာပါ။
Posted by 4shokelay at 9:28 PM No comments:
ခု အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ မှတ်ပုံမတင်ဘူးဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အများစုက မှတ်ပုံမတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဦးအောင်ရွှေ ကတော့ နေမကောင်းဘူးဆိုပြီး
အစည်းဝေးကို တက်ရောက်ခြင်းမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ သူက မှတ်ပုံတင်ဖို့ ကြိုးပန်းခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
အစည်းဝေးဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ အဖွဲ့ ချုပ်ဝင်လူငယ်တဦးက တရွှေ တော့ ကျသွားပြီ
နောက်တရွှေ ပဲ ကျန်တော့တယ် လို့ကြွေးကြော်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ လူငယ်အမျိုးသမီးတဦးကတော့ တကယ်ပျော်စရာကြီး ရှင်၊ တကယ်အောင်ပွဲခံမဲ့ နေ ကြရင် ဒီထက်ကို ပို ပျော်ရမှာပဲနော်လို့မျက်ရည်ဝဲ ရင်းဆိုပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ဦးအောင်ရွေကတော့ဒေါ်စုဆန္ဒ အတိုင်းရပ်တည်ပေးလိုက်တယ်လို့ သူ့သဘောထားကိုပြောကြောင်းသိရပါတယ်
Gmail ပေးပို့ မှု
Posted by 4shokelay at 1:14 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 10:40 PM No comments:
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဆန့်ကျင်ရေး မန္တလေးမြို့ လှုပ်ရှားမှု စတင်ပြီ
၂၇၊ မတ်လ၊ ၂၀၁၀ တော်လှန်ရေးနေ့ည- ဆေးနီမှုတ်(စပရေး)လှုပ်ရှားမှု (မန္တလေး)
ကျွန်တော်တို့ လဖစတ (AAMD) - Burma အင်အားစုမှ (စပရေး)မှုတ်ဆေးအနီတွေနဲ့
မန္တလေးမြို့ပေါ်အနှံ့ နံရံတွေပေါ် FREE, FREE Su Kyi, FREE Daw Su, FREE
2010, FREE Aung San Su Kyi, ရွေးကြက်ခြေခတ်(ရွေးကောက်ပွဲအလိုမရှိ)
အစသဖြင့် လိုက်လံရေးသားကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်
နာဂစ်အခြေခံဥပဒေနှင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး၊
မှုတ်ဆေးတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့ပေါ် နေရာတွေကတော့
မန္တလေးတိုင်းတရားရုံးချုပ်နံရံတွေ၊ TTC (ပညာရေးကောလိပ်), နန်းရှေ့၊
ရွှေကျောင်းကြီး၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်အရှေ့ဘက် ၆၉ လမ်း၊ ဗောဓိကုန်း၊ ၆၂ လမ်း၊
၆၄၊ ၆၅ လမ်း သိပ္ပံလမ်း၊ မြို့သစ်၊ လမ်း ၈၀၊ ၈၁၊ ၈၂၊ ၈၃၊ ၈၆၊ ၈၇ လမ်းတွေ
နဲ့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးပတ်ဝန်းကျင်၊ ရွှေကျီးမြင်ဘုရားပတ်ဝန်းကျင်
အစသဖြင့် ၀င်းနံရံ၊ တံခါးဝ၊ အုတ်ခုံ၊ ရေကန်၊
ဓမ္မာရုံနံရံအစသဖြင့်တွေပေါ်မှာ ဆေးနီစပရေးဘူးနဲ့ လိုက်မှုတ်ရေးခဲ့ကြပါတယ်။
မပြတ်တမ်းဆက်လက် ဆင်နွှဲကြဖို့ အလေးအနက်ထားတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by 4shokelay at 4:50 AM No comments:
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် အတူဆန့်ကျင်ရန်ကြေငြာချက်
Joint Statement No3-2010 of ABMA+88+ABFSU_Corrected Version
Posted by 4shokelay at 11:47 AM No comments:
သာသနာ့ဥသျှောင်ဆရာတော်များမှ နအဖရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် သဘောထားအမြင်
Posted by HRmyanmar at 10:45 AM No comments:
စစ်အုပ်စုရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ ဆိုတာနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေ ဆိုတာ ထွက်လာ အပြီးမှာ နိုင်ငံရေးလောက ပွဲဆူသွားပါတယ် ၊ အထူးသဖြင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ပြည်သူ တွေရဲ့ဆန္ဒမဲတွေ ၊ ရရှိထားပါတယ်ဆိုတဲ့ NLD ပါတီတွင်း ဘယ်သူတွေက နိုင်ငံရေးသမားလဲ ၊ ဘယ်သူတွေက နိုင်ငံရေး စားဖား တွေလဲ ကွဲပြား လောက်အောင်ကို ရှေ့ဘယ်လို ရပ်တည် ကြမလဲလို့ အငြင်းပွားမှုတွေ ဖြစ်စေ ခဲ့ရပါတယ် ၊ NLD ပါတီတွင်းက ပြဿနာက ဒီ၂၁ နှစ်မှာ မဆန်းပါဘူး ၊ လူကြီး လူငယ် ပြဿနာ ၊ တိုက်ရဲသူ တိုက်ပွဲဝင်ချင်သူ တွေနဲ့နောက်တွန့်သူတွေ ကြားက ပြဿနာ ၊ ပါတီ ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ အမတ် နေရာကိုပဲ ဖက်တွယ် ထားချင် သူတွေနဲ့ ပြည်သူ့ မျက်နှာပဲ ကြည့်ချင်သူတွေရဲ့ ပြဿနာ ၊ တလျောက်လုံး ရှိလာခဲ့တာပါ ၊ ထားပါ ။ ပြောချင်တာက NLD ထဲက ပြဿနာတွေ မဟုတ်ပါဘူး ၊ စုန်းပြူး ဆိုတာတော့ အဖွဲ့အစည်း တိုင်းမှာ ရှိမှာပါပဲ ၊ ထောင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ တိုက်ရဲ တဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ မျက်နှာ ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မျက်နှာနဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူက ဆန္ဒပြုထားတဲ့ ပြည်သူ ရှေ့ဆောင် ပါတီ ဖြစ်နေတာတွေကြောင့် NLD ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးက (မဖြစ်မနေ) ၀ိုင်းရံရမှာပါ ။ မမှားအောင် ၀ိုင်းတည့်မတ်ပြီး လက်တွဲ တိုက်ပွဲဝင်ကြရမှာပါ။
ပြောချင်တာက အဲဒီလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေတဲ့ နအဖ စစ်အုပ်စုရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ၊ နအဖ က သူဖြစ်စေချင် သလိုတွေ ဖြစ်အောင် ဖျားယောင်း မြှူဆွယ်လိုက်တဲ့ ၊ အာရုံလွှဲတဲ့ တိုက်ပွဲခေါ် သံပါ ၊ ၁၉၉၀ တုံးက ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ပြည်သူ့ ဘက်တော်သား ဒီအမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ ၊ ကိုင်စွဲတဲ့ တိုက်ပွဲ လမ်းကြောင်း တစ်ခုပါ ၊ ခု ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာက စစ်အုပ်စုက ကိုင်စွဲတဲ့ လမ်းကြောင်းပါ ၊ စဉ်းစား ကြည့်ကြပါ ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ပြယုတ်ပါ ၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ ကိုဖေါ်ကြူးခြင်းပါ ၊ ပြည်သူပေါင်း များစွာကိုသတ်ပြီး အာဏာကို လုထားတဲ့ ပြည်သူ့ ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင် ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင် တွေက ရွေးကောက်ပွဲလို့ ဘာလို့ ပြောလာသလဲ ၊ ၁၉၉၀ တုံးက တစ်ကြိမ် ရွေး ကောက်ပွဲ လုပ်ပေးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီကို ပြည်သူက ရွေးချယ် ခဲ့ပါလျက် ၊ နှစ် ၂၀ ကျော် အာဏာ လွှဲမပေးပဲ အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြ အချိန်တွေ ဆွဲပြီးကာမှ ခုတစ်ခါ ရွေးကောက်ပွဲပြန် လုပ်မယ်လို့ ဘာလို့ ပြောလာသလဲ ၊ ရိုးရိုး ရှင်းရှင်းလေးပါ ။
ဗမာပြည် ပြည်သူတွေ ပေါက်ကွဲတော့မဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာတိုင်း ၊ နိုင်ငံရေး အရ ဘေးကြပ် နံကြပ်ကြုံ လာတိုင်း ၊ ဗမာပြည် နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲ တစ်ခုခု မဖြစ်မနေ လုပ်ပေးရတော့မဲ့ အခြေအနေတိုင်း ၊ မဆလ အမည်ခံ လက်ထက်ထဲက စစ်အုပ်စု လုပ်နေကြ ၊ လမ်းလွှဲနေကြ ပုံစံပါ ။
လူမျိုးရေး ၊ ဘာသာရေး အထိကရုန်းတွေ ဖန်တီးတာမျိုး ၊ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ( ပွဲလမ်းသဘင်)တွေဖန်တီး ပေးလိုက်တာမျိုး ၊ ၀န်ထမ်းတွေ လစာတိုးပေး လိုက်တာမျိုး ၊ စသဖြင့် ပြည်သူတွေ လမ်းလွှဲအောင် အာရုံလွှဲပြောင်းမှု တစ်ခုခု စစ်အုပ်စု အမြဲ လုပ်လေ့ ရှိပါတယ် ၊ ခုလဲ နိုင်ငံရေး ပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေဆိုတာနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥပဒေဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေ ထုတ်ပြန်ပြီး ၊ ပြည်သူတွေေ၀၀ါး သွားအောင် လမ်းလွှဲ လိုက်တာပါ ။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီး ကရော ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု အသီးသီးကရော ၊ ပြည်သူတွေကပါ ဒီဥပဒေတွေ ဟာ တဘက်သတ် ရေးဆွဲ ထားတဲ့ ဥပဒေတွေ ဖြစ်တယ် ၊ မျှတမှု မရှိဘူး ၊ လူပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး တစ်ယောက် အတွက် တမင် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ပြန်တာ ဖြစ်တယ် ၊ NLD နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ခွဲထုတ်တာ ဖြစ်တယ် ၊ စသဖြင့် ၀ိုင်း ဝေဖန်ကြမယ် ဆိုတာ သူတို့ တွက်ပြီးသားပါ ၊ သိက္ခာမဲ့တဲ့ ကြေငြာချက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သိသိနဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဘာကြောင့်လဲ ။ နှစ်ချက်ရှိပါတယ် ၊ တစ်ချက်က NLD ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရွှေဂုံတိုင် ကြေငြာ စာတမ်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ် စောက်ဂရု မစိုက်ဘူးလို့ ပြတာပါ။ နောက်တစ် ချက်က ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဖြတ်သန်း သင့်တယ် ၊ မဖြတ်သန်း သင့်ဘူး ၊ မျှတတယ် ၊ မမျှတဘူး ငြင်းခုန် ကြတာတွေ လိုချင်လို့ကို တမင်လုပ်တာပါ ။
စစ်အုပ်စုက လက်တွေ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ မပြောနဲ့ စာရွက်ပေါ် မှာတောင် ဘယ်တုန်းက မျှတခဲ့ဘူးတာ ရှိလို့လဲ ၊ ဘယ်နေရာမှာမှ ဘယ်တုန်းကမှ မမှန်ခဲ့ မမျှတ ခဲ့တာ သိသိနဲ့ ၊ ဒါမမှန်ဘူးလို့ တချက်ခြင်း လိုက်ထောက် ပြောပြီး သူတို့ကို နေရာပေး ဆွေးနွေး သလို ဖြစ်တာမျိုး လိုချင်လို့ကို တမင် ထုတ်ပြန်တာပါ ။ခုလို NLD တွေ ၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ အချင်းချင်း သဘောထား ကွဲပြီး တကယ် လုပ်ရမဲ့ တိုက်ပွဲ အကောင်ထည် ဖေါ်ရေး အစီစဉ်တွေ မဆွေးနွေး ဖြစ်အောင် လုပ်လိုက်တာပါ။ တကယ်တမ်းက ပြည်သူတွေ အုံကြွတော့မဲ့ အရိပ်အခြေတွေ သူတို့ မြင်နေရလို့ ၊ ရွေးကောက်ပွဲပြန် လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပြ ခဏ ဟန့်ထားလို့ ရမလားလို့ ၊ အာရုံ လွှဲတာပါ ။ နေ၀င်း ခေတ်မှာ ၂၆ နှစ်၊ စောမောင် ခင်ညွှန့် သန်းရွှေ ခေတ်မှာ ၂၂ နှစ်နဲ့ ၊ နှစ်ပေါင်း ၅၀ နီးပါး မွဲပြာကျ နေတဲ့ ပြည်သူ တွေက ၊ သူတို့ရဲ့ မျိုသိပ် နေရမှုတွေကို ပွင့်အံဘို့ ၊ မချိတင်ကဲ အံခဲ ခံစားနေရတာတွေကို ပေါက်ကွဲ ပလိုက်ဘို့၊ မိုးထားတဲ့ သေနတ်ပြောင်း တွေကို မော်ကြည့် နေကြပြီ ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေ ဆီက နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ များပြား လာနေတဲ့ တောင်းဆိုမှုတွေက သူတို့ကို ခြောက်လှန့်နေပြီ ။
ရှစ်လေးလုံး လူထု အရေးတော်ပုံကြီး တုန်းကလဲ တစ်တိုင်း တစ်ပြည်လုံး အုံကြွ တောင်းဆို နေတာကို ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ် အာဏာ သိမ်းခဲ့ပြီး တက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး အရှိန်အဟုန်မှာ ခံချဘို့ စိုင်းပြင်းနေတဲ့ လူထုကြီးကို ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးမယ် ၊ ပါတီတွေ ထောင်ကြပါ ဆိုပြီး ၁၉၉၀ ရွေး ကောက်ပွဲနဲ့ အာရုံ လွှဲခံခဲ့ရတယ် ၊ အဲဒီ တုန်းကသာ ပြီးရင် စစ်တန်းလျား ပြန်မှာပါ ဆိုတဲ့ လူသတ်ကောင် တွေရဲ့ ကတိကို မယုံပဲ ရှစ်လေးလုံးရဲ့ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဆက်တိုက်ပွဲဝင် ဖြစ်ခဲ့ရင် ၊ ဖိနှိပ်ခံ ဘ၀ ဒီလောက် ကြာခဲ့နိုင်ပါ့ မလား ။
အာရုံလွှဲ မခံကြပါနဲ့တော့ ။ အလုပ်သမား တော်လှန်ရေးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ခြေ မြင်လို့ ၊ တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်တော့မဲ့ အခြေအနေတွေ မြင်လို့ ၊ အားလုံးကို အာရုံလွှဲတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ ဆိုတာကို ကသောင်းကနင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ၊ မမျောကြပါနဲ့ ၊ တကယ် လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေ (ပြည်သူ လူထုကြီးနဲ့ ထပ်တူ တိုက်ပွဲဝင်ဘို့ ) အတွက်သာ ပြင်ဆင်ကြပါ ၊ ပြည်သူတွေကို တိုက်ပွဲ ၀င်ဘို့ ဦးဆောင်လမ်းပြကြပါ ၊ NLD ထဲက ပြည်သူ့သူရဲကောင်းတွေနဲ့ စစ်အုပ်စုထိပ်တိုက်တွေ့ တော့မှာကို ၀ိုင်းရံကြပါ ၊ တစ်ဗိုလ်ကျ တစ်ဗိုလ်တက် တိုက်ပွဲ ၀င်နိုင်ဘို့ ပြင်ကြပါ ၊ စစ်အုပ်စုက အသက် ရှစ်ဆယ်ကျော် အဖိုးကြီး - ဘဘ ဦးဝင်းတင်တို့ ဦးတင်ဦး တို့ကိုတောင် ပြန်ဖမ်း နိုင်ပါသေး တယ် ၊ စစ်အုပ်စုက သူတို့ အာဏာ တည်မြဲရေး အတွက် ဘာမဆို လုပ်ဘို့ ၀န်မလေးတာ မမေ့လျော့ ကြပါနဲ့ ၊ တိုက်ပွဲက ကပ်နေပါပြီ ၊ ဘဘ ဦးဝင်းတင် ပြောတဲ့ မကြောက် တရား လက်နက် ၊ သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး လက်နက် ၊ စစ်အာဏာရှင် စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် တစ်ခုထဲ ချမှတ် ရှေးရှု ရင်ဆိုင် ချီတက်ရေး လက်နက်တွေ ကိုင်စွဲထားပြီး NLD နဲ့ ထပ်တူ ၊ ပြည်သူက ဦးဆောင် တိုင်ပွဲ ၀င်ကြပါစို့ ။
စစ်အာဏာရှင် စနစ် မုချကျဆုံးရမည် ။
ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည် ။
Posted by 4shokelay at 6:39 AM No comments:
Posted by 4shokelay at 6:01 AM No comments:
Posted by HRmyanmar at 10:02 AM No comments:
ခွေးဟောင်တာလူမသိ ခဲနဲ့ပေါက်တာ လူသိတယ်....။ (အိန္ဒိယသံရုံးရှေ့ ဆန္ဒပြမှု ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်)
ပြီးခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းအတွင်းက နယူးဒေလီ မြန်မာသံရုံးရှေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာ ခေတ္တထိန်းသိမ်းခံရပြီး ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာတဲ့ အရှင်ထာဝရနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့တာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
"မနေ့က နေ့လည် ၁၁နာရီက ဦးဇင်းတို့လူ၇၀လောက် မြန်မာသံရုံးရှေ့ကို ရောက်တယ်။ ဆေးမှုတ်လှုပ်ရှားမှု အနေနဲ့သွားတာပါ..။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွတ်ပေး၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို အလိုမရှိဘူး တကမ္ဘာလုံးအနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ပေးဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေ ကိုင်ဆောင်ပေးဆိုပြီး ကြွေးကြော်သံတွေနဲ့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီ့အချိန်မှာ နအဖသံရုံး အရာရှိကထွက်လာပြီးတော့ ကြိမ်းလားမောင်းလားလုပ် ရန်စပြီး အိန္ဒိယရဲဋ္ဌာနကို လှမ်းခေါ်ပြီး ဖမ်းဆီးခိုင်းပါတယ်။
ဦးဇင်းတို့က ကားပေါ်ပြန်တက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးပြန်မယ့် အချိန်မှာရဲတွေရှေ့မှာ သံရုံးအရာရှိက မင်းတို့ဘာလားညာလား ဆိုပြီးရန်စစကား ထပ်ပြောတဲ့ အတွက် မခံမရပ်နိုင်တဲ့ ဆန္ဒပြလူငယ်တွေက အင်မတန်ဒေါသ ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာမကြေ သီချင်းကိုဆိုတယ်။ နောက်သူတို့က ရဲကိုကားထွက်ခွင့် မပေးခိုင်းတဲ့အတွက် ကားပေါ်က ပြန်ဆင်းလာပြီး သံရုံးရှေ့မှာရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ရိုက်ချိုးပစ်တာတွေ ဖြစ်လာတာပါ..။ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဦးဇင်းတို့ဘက်က စပြီးရန်စတာမဟုတ်ဘူး နအဖသံရုံးက စပြီးရန်စ စိန်ခေါ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် လူငယ်တွေ အလွန်အင်မတန်မှ ဒေါသထွက်ပြီး ဒီလိုအခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ...။
နောက်ဦးဇင်းတို့အဖွဲ့ကို တင်မိုတင် ရဲစခန်းကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာပါ။ နောက်ရဲစခန်းမှာ ဦးဇင်းတို့ကို ဘာကြောင့် ဖျက်ဆီးတာလဲ မေးပါတယ်။ ငါတို့ဖျက်ဆီးတာမဟုတ်ဘူး သူတို့ကငါတို့ကို စိန်ခေါ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိုလို့ ငါတို့လုပ်တာလို့ ပြောလိုက်တယ်။ နောက်ဦးဇင်းတို့က အိန္ဒိယအစိုးရကို ဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး အာဏာရှင် မြန်မာအစိုးရကို ဆန့်ကျင်တာလို့ ပြန်ပြောပြပါတယ်။ နောက်ဦးဇင်းတို့ အခုအာမခံနဲ့ပါ စွဲချက် ၄ခုနဲ စွဲထားပါတယ်။ လာမယ့်အင်္ဂါနေ့မှာ တရားရင်ဆိုင်ရဦးမှာပါ...။
အထဲမှာ လွတ်လပ်မှုရှိပါတယ် သူတို့က ဦးဇင်းတို့ရဲ့လုပ်ရပ်ကိုအားပေးပါတယ်.. သံရုံးက သူတို့အထက်ကိုတိုင်တော့ သူတို့အနေနဲ့ အမှုမဖွင့်မရတဲ့ အတွက် တရားစွဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရားဥပဒေအရ ရင်ဆိုင်ရဦးမှာပါ...။
အခုတချို့ သတင်းဋ္ဌာနတွေမှာ (သတင်းဋ္ဌာနကြီးတခုက) ရေးထားတာက မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူတွေ အကြမ်းဖက် ဆန္ဒပြတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်...။ ဒါကိုဦးဇင်းတို့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး.. ။ ဦးဇင်းတို့အကြမ်းဖက်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ နောက်ရဲက သိမ်းမိတာ တုတ်ဓားတွေ ပါတာမဟုတ်ပဲ ဆိုင်းဘုတ်တွေပဲ သိမ်းမိတော့ တရားစွဲဖို့ခက်နေတာပေါ့။ စွဲချက်တင်မရဖြစ်နေတယ်လေ။ နောက်ရဲတွေကိုယ်တိုင်က ရီနေတယ်လေ..။ ဦးဇင်းတို့ကို ပြန်တော့ ပြန်တာ့ဆိုပြီး အတင်းပြန်ခိုင်းတာ .. နောက်သံအမတ်က ဖမ်းခိုင်းတဲ့ အတွက်ကြောင့် အခုလိုဖြစ်ရတာပါ.. လွှတ်တော်အမတ်တွေ၊ တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေတွေ နောက် UNHCR တို့ချက်ချင်းရောက်လာပြီး လာကူညီပေးတယ်။ ရဲတွေကို ပန်ကာတွေဖွင့်ခိုင်း ဘာခိုင်း အစားအစာမုန့်တွေက အစအကုန်ပါလာတာပါ။ အဲ့လိုနိုင်ငံခြားသားတွေတောင် အားပေးကူညီကြပြီး လူအများနားထောင်တဲ့ ဒီသတင်းဋ္ဌာနကြီးတခုက ဒီလိုအကြမ်းဖက်တယ်လို့ ရေးတာတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒီကလူတော်တော်များများကလည်း အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တယ် ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တော်တော်ဒေါသဖြစ်နေပါတယ်။ ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာ စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကို သက်ဆိုးရှည်အောင် လုပ်နေတဲ့ အတွက် စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်တဲ့နေရာမှာ အကြမ်းဖက်တယ် ဆိုပြီးသုံးတဲ့ စကားလုံးကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး. ဟု အရှင်ထာဝရမှ ပြောဆိုသွားပါတယ်။
စွဲချက် တင်တဲ့ ပုဒ်မတွေကတော့... Twenty sive Burmese activists includingamonk and five women, were charged by the Delhi police with sections 147, 149, 188 and 427. They are to be produced on March 20, 2010 in Partiala Court in New Delhi.
ဓာတ်ပုံ ... အရှင်ထာဝရ
Posted by 4shokelay at 10:33 AM No comments:
မြန်မာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
Posted by 4shokelay at 9:58 AM No comments:
နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေနှင့်ပက်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစု သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်
FDB Stm on SPDC Laws for Election
Posted by 4shokelay at 9:36 AM No comments:
ဒီမိုကရက်ပါတီ ဌာနချုပ်နှင့် ၀န်ကြီးချုပ်ရုံးကိုUDDများက သွေးများ ဖြင့်သုတ် လိမ်း
လွှတ်တော် ဖျက်သိမ်းပြီး ၀န်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝ နုတ်ထွက်ရန် တောင်းဆိုနေသည့် ဘန်ကောက်မြို့မှ အနီရောင်ဝတ် ဆန္ဒပြ သမားများက ယနေ့ ညနေ ၅ နာရီတွင် ထိုင်းအစိုးရရုံး အဆောက်အအုံ ၀င်ပေါက်ကို ၎င်းတို့၏ သွေးများဖြင့် ပက်ဖျန်းခြင်းဖြင့် ဆန္ဒပြပွဲ အရှိန်ကို မြှင့်တင်လိုက်ကြသည်။
“ဒါက ငြိမ်းချမ်းတဲ့ တိုက်ခိုက်မှု တခုပါ။ ၀န်ကြီးချုပ် အဖိဆစ်က ကျနော်တို့ရဲ့ သွေးတွေကို နင်းပြီး အစိုးရရုံးကို ရောက်အောင် သွားရဲလား ဆိုတာ ကျနော်တို့ မြင်ချင်ပါတယ်” ဟု ရှပ်နီအဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင် တဦး ဖြစ်သူ Weng Tojirakarnက ဆိုသည်။
၀န်ကြီးချုပ် နုတ်ထွက်ပေးခြင်း မရှိပါက သူ၏ ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ ဌာနချုပ်ရှေ့ နှင့် သူ၏ အိမ်ရှေ့သို့ သွားရောက်ပြီး သွေးဖြင့် ပက်ဖျန်း ဦးမည်ဟု Weng Tojirakarnက ပြောသည်။
ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီမှ စတင်ပြီး ဆန္ဒပြသူများထံမှ သွေးများကို တခါသုံး ဆေးထိုးအပ်များဖြင့် စုတ်ယူ စုဆောင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆန္ဒပြသူ တသိန်းကျော်ထံမှ သွေး စီစီ တသန်း (ပုလင်း ၁၀၀၀ ခန့်) ရရှိရန် မျှော်မှန်းခဲ့သော်လည်း ယနေ့ညနေပိုင်း သွေးဖြင့် ပက်ဖျန်းဆန္ဒပြချိန်အထိ သွေး စီစီ သုံးသိန်းခန့်သာ ရရှိခဲ့သည်ဟု ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်။
နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဆန္ဒပြမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည့် ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝက အနီရောင်ဝတ် ဆန္ဒပြသူတို့၏ တောင်းဆိုချက်ကို လိုက်လျောမည် မဟုတ်ကြောင်း ယမန်နေ့က ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ယနေ့တွင်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်က ဘန်ကောက်မြို့တော်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် အနီရောင်ဝတ် ဆန္ဒပြသူတို့ အိမ်ပြန်လိုပါက အစိုးရက စီစဉ်ပေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဘန်ကောက်ပို့စ် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း သက်ဆင်ရှင်နာဝပ်ကို ထောက်ခံသူများဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက မစ္စတာ သက်ဆင်နှင့် ၎င်း၏ ဇနီး ပိုင်ဆိုင်သော ဘတ်ငွေ ၄၆ ဘီလီယံကို တရားရုံးချုပ်၏ အမိန့်အရ အစိုးရက သိမ်းလိုက်ပြီးနောက် အနီရောင် ၀တ်သူများ၏ ဆန္ဒပြမှုများ ပိုမို ပြင်းထန်လာသည်။
မစ္စတာ သက်ဆင် အာဏာရှိစဉ်က သူ့ကို ကန့်ကွက်သူများမှာ အ၀ါရောင်ဝတ် ဆန္ဒပြသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့က မစ္စတာ သက်ဆင် ပြုတ်ကျစေရန် ဘန်ကောက်မြို့တွင် ဆန္ဒပြပွဲကြီးများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြဖူးသည်။
မစ္စတာ သက်ဆင် နှင့် ၎င်းကို ထောက်ခံသည့် မစ္စတာ စမတ်၊ မစ္စတာ ဆုမ်ချိုင်း စသည့် ၀န်ကြီးချုပ် သုံးယောက် အာဏာ လက်လွှတ်သွားပြီးနောက် လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝ အာဏာရလာခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ၀န်ကြီးချုပ်သည် အာဏာရလာချိန်မှစ၍ အနီရောင်ဝတ် ဆန္ဒပြသူတို့ ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မှုကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
ထိုင်းအစိုးရက ဤဆန္ဒပြပွဲတွင် ထိုင်းနိုင်ငံသားများကိုသာ ခွင့်ပြုထားသည်။ အနီရောင်ဝတ် ဆန္ဒပြသူများ ကြားတွင် မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအိုနိုင်ငံတို့မှ အလုပ်သမားများကို စစ်ဆေး တွေ့ရှိပါက ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်နှင့် အလုပ်ရှင်အား ဘတ်ငွေ တသိန်း (ကျပ် သိန်း ၃၀ ဝန်းကျင်) ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရက ကြေညာထားသည်။
အလုပ်သမားများကို နေ့တွက်စရိတ် ပေးပြီး ဆန္ဒပြရန် စေခိုင်းမှုများ မပေါ်ပေါက်စေရေးအတွက် ထိုသို့ တားမြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ယူနီဗာဆယ် မှ ကူးယူတင်ပြပါသည်။
Posted by 4shokelay at 9:07 AM No comments:
ကိုဗဟိန်းတို့ အမွေပေးခဲ့တဲ့ အာဇာနည်သွေးတွေက ကျနော်တို့ရင်ဘတ်ကိုရိုက်ခတ် သေနတ်ကြည် တချက် ဖောက်တိုင်း မီးဟုန်းဟုန်းတောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြည်သူဟာ ပြည်သူကိုပဲချစ်တယ် ပြည်သူကပေါက်ဖွားလာတဲ့ ပြည်သူအစိုးရကိုပဲလိုချင်တယ် ပြည်သူဟာ ပြည်သူတွေအတွက် အရေးတော်ပုံတပ်သားတွေဖြစ်တယ် ၈၈ ရဲ့လှံစွပ်ဖျားမှာရဲရဲနီတဲ့နှင်
းဆီပွင့်တွေပွင့်ခဲ့တာ လည်း ၂၂ နှစ်ကြာခဲ့ပါပြီ သမိုင်းတခေတ်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ အရေးကြီးပြီညီနောင်အပေါင်းတို့ သီချင်းကို ဆိုရင်း ၂၀၁၀ သတ်ကွင်းထဲကို ရဲရဲတင်းတင်းနင်းဖြတ်လို့လာပါပြီ။
ကိုဘဟိန်းတို့ပုခုံးပြောင်းခဲ့တဲ့သမိုင်းပေးတာဝန်အတိုင်း ဗိုလ်အောင်ကျော်က ၁၃၀၀ ပြည့်မှာတာဝန်ကျေခဲ့သလို အာဏာရှင်ရဲ့ကြိုးစင်ပေါ်ရဲရဲဝင့်ဝင့်တက်ခဲ့တဲ့ ကိုတင်မောင်ဦးလည်း ၇၄ မှာတာဝန်ကျေခဲ့ပြီ ကိုဖုန်းမော်က ၈၈ မှာတာဝန်ကျေခဲ့သလိုကိုသက်ဝင်းအောင်လည်း ၂၀၀၆ မှာတာဝန်ကျေခဲ့ပြီ။
ညီနောင်ရဲဘော်တို့ရေ ၂၀၁၀ ဟာလည်းပြည်သူတွေအတွက် သေရေးရှင်ရေးမျှအရေးကြီးနေပြီ စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို တွန်းလှန်ဖြိုလှဲ ဒေါင်းအလံတွေတလူလူလွင့်ဘို့ အရေးတော်ပုံတပ်သားတို့ရဲ့သွေးေဲတွနဲ့ လူ့အခွင့်ရေး ကျောက်စာကိုရေးထိုး ဆူးခင်းမှန်သမျှ တိုးကြပါစို့.......
ဇော်မြင့် - မင်းရန်နိုင်
Posted by 4shokelay at 10:13 AM No comments:
ဆုတောင်းပွဲတွင် ပါဝင်သော ဒေသခံရွာသားတဦးက “စစ်အစိုးရရဲ့ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုကို ခံနေရတဲ့ ရွာသားတွေဟာ နအဖ စစ် တပ်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုကို ခံရလို့ တောထဲတောင်ထဲ ထွက်ပြေးလိုက်၊ ပုန်းရှောင်လိုက်နဲ့ နှစ်ပေါင်းကလည်း ကြာလာပါပြီ။ အဲသလိုပဲ စစ် အာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာ ကျနော်တို့လိုပဲ ဘ၀တူ တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံး ငြိမ်းချမ်းမှုတွေ ရရှိပါစေဆိုပြီးတော့ ဆု တောင်းပွဲကို ကျင်းပရတာပါ”ဟု ပြောသည်။
“အခုထိ ကျနော်တို့တွေ နအဖ စစ်တပ်ရဲ့ ဖိနှိပ်မှုအောက်ကနေ မလွတ်မြောက်သေးပါဘူး။ နအဖက ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ်လို့ ကျနော်တို့ ကြားရတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာလည်း ကျနော်တို့အတွက် ဘာမှ ထူးလာမှာ မဟုတ်ဘူး။ စစ်ကို ကျနော်တို့ မလိုလားဘူး။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ လုပ်ကိုင်စားသောက်ချင်တယ်”ဟု သူက ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
ဆုတောင်းပွဲသို့ လာရောက်ကြသည့် ကျေးရွာဒေသခံများသည် မီးထွန်းညှိထားသည့် ဖယောင်းတိုင်များကို ကိုယ်စီကိုင်ဆောင် ကာ မိမိယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန် စသည့် ဘာသာအလိုက် ဆုတောင်းခဲ့ကြသည်ဟု အဆိုပါ ဒေသခံရွာ သားက ပြောသည်။
ကရင်ပြည်နယ်၊ ၀င်းရေးမြို့နယ်အတွင်းတွင် ကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများစုပေါင်း၍ ယခုလို ဆုတောင်းပွဲမျိုးကို ကျင်းပပြုလုပ်သည် မှာ ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
မတ်လ ၁၄ရက်။ စောခါးစူးညား (ကေအိုင်စီ) From http://www.kicnews.org/
Posted by 4shokelay at 9:52 AM No comments: